Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » ITB Sina no hampiantrano fivorian'ny indostrialy ivelan'ny edisiona manokana
ITB Sina no hampiantrano fivorian'ny indostrialy ivelan'ny volana jona ho solon'ny fanontana manokana
Ny fanangonana indostrialy dia hetsika tambajotra tokana fanasana ho an'ireo matihanina amin'ny indostria monina any Shina mba hifanakalo fanavaozana sy fahitana ny ho avin'ny tsena fitsangatsanganana sinoa
ITB Sina Fanontana Manokana dia tsy hatao araka ny kasaina hatao amin'ny Mey
Ny fiovana dia vokatry ny famerana ny sisintany mamaky ny areti-mandringana COVID-19 mitohy
ITB China 2021 any Shanghai, 24 - 26 Novambra, mandeha amin'ny làlan-kevitra hybrid vaovao
Ny mpikarakara ny ITB China dia nanambara fa hampiantrano fivorian'ny indostrialy ivelan'ny volana Jona ho solon'ny hetsika ara-barotra ITB China Edisiona manokana nokasaina tany Beijing tamin'ny 7- 8 Mey. Ny fanangonana indostrialy dia hetsika tambajotra tokana fanasana ho an'ireo matihanina amin'ny indostria monina any Shina hanakalo ny fanavaozana sy ny fahitana ny ho avin'ny tsena fitsangatsanganan'ny Sinoa.
ITB China Special Edition dia namboarina tamin'ny faran'ny taona lasa ho toy ny hetsika famenon'ny ITB China 2021 tamin'ny volana novambra ary ho ivon-toeran'ny indostrian'ny fifanakalozam-baovao sy fifanakalozana ara-barotra mankany amin'ny fanarenana tsikelikely ny tsenan'ny dia iraisam-pirenena.
Noho ny fameperana mafy ny sisintany mamaky ny sisintany ary mbola mipetraka any Shina, ny fanantenana ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena mankany sy avy any Shina dia tsy azo vinavinaina amin'izao fotoana izao ary noho izany ny masoivohon'ny fizahan-tany sinoa dia mbola tsy vonona ny hanohy hetsika ara-barotra mahazatra momba ny fividianana. , fonosana ary fampiroboroboana ny vokatra fitsangatsanganana iraisam-pirenena.
"Hita taratra amin'ny zava-misy eo amin'ny tsena ankehitriny, ny hetsika mifantoka amin'ny varotra - ITB China Special Edition - dia tsy nahatanteraka ny asany saika tsy hahatratra ny fenitry ny sanda ara-barotra natolotr'i ITB China ho an'ireo mpiara-miombon'antoka aminy sy ny mpanjifany," hoy Andriamatoa David Axiotis, tale jeneralin'ny ITB Sina. “Na izany aza, ny fanirian'ity orinasa ity hifandray hatrany amin'ny olona dia mitohy tsy an-kijanona, ary izany indrindra no hataontsika amin'ny tapany voalohany amin'ny 2021 amin'ny alàlan'ny fanomezana fotoana tambajotra madio hihaonana mivantana. Mandritra izany fotoana izany, tohanan'ny fiandrasana ny famerenana amin'ny laoniny ny dia an-dafin'ny sisintany sinoa zarain'ny mpiara-miombon'antoka amintsika rehetra, dia mandroso amin'ny ITB China ho avy isika amin'ny volana novambra miaraka amin'ny vahaolana vaovao ho an'ireo mpampiranty, mpividy ary mpiara-miasa hifandray sy hihaona. miaraka amin'izy ireo, manampy azy ireo hamolavola ny tontolon'ny asa vaovao eo amin'ny tsenan'ny dia amin'ny dia. "
Ny andiany fahefatra an'ny ITB Sina, fampisehoana varotra manokana tsy miankina B2B any Shina, ary ny Konferansa ITB China miaraka aminy dia hatao any Shanghai ny 24 - 26 Novambra 2021 miaraka amin'ny foto-kevitra hybrid feno izay hahafahan'ny mpampiranty rehetra - na aiza na aiza toerana misy azy ireo - hihaona amin'ireo mpividy any Sina.